Public Health in Myanmar: အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၇) Oral practice
ကျွန်တော်မေးချင်တာလေးရှိလို့ ပါကျွန်တော်ဟာအတွေ့ အကြုံတခါနှစ်ခါပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သုတ်မထွက်ဘူး
မထွက်ဖူးဖြစ်နေတယ်ပီးတော့အရက်တို့ ဆေးတို့ လဲမသုံး
ကျန်းမာရေးပညာပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုပဲ။ ဒီလို oral sex ကိစ္စကို မြန်မာလူမျိုးတွေကို ပညာပေးတောင် ရေးနေရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ သူများတွေ လုပ်တာကို မကောင်းတာ မှန်သမျှ အကုန်သာ လိုက်လုပ်နေကြရင်တော့ လူမှုရေး ပြဿနာတွေက ရှင်းလို့ ဆုံးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ENT က ဆရာတွေ oral sex သမားတွေမှာ HPV ကြောင့် Ca tongue ဖြစ်မဖြစ် သုတေသန လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၂၅-၂-၂ဝဝ၄။ ဆက်ဆံရာတွင် ပါးစပ်ကိုသုံးလျင် Human papillomavirus (HPV) ကြောင့် Oral tumours ခံတွင်းအကြိတ်ရောဂါ ရနိုင်သည်ဟု သံသယရှိခဲ့သည်မှာ ကြာပြီ။
၂၆-၂-၂ဝဝ၄။ အချို့သော Mouth cancer ခံတွင်းကင်ဆာတို့သည် ပါးစပ်သုံးဆက်ဆံနည်းကြောင့် ကူးစက်စေနိုင်သည်။
၁၁-၅-၂ဝဝ၇။ New England Journal of Medicine (NEJM) တသက်တာတွင် လိင်ဆက်ဆံရာ၌ ပါးစပ်သုံးသည့် အဖေါ် ၆ ယောက်ထက် ပိုသူ ယောက်ျား-မိန်းမတို့သည် Cancer of the tonsils or at the base of the tongue အာသီး သို့မဟုတ် လျှာအောက် ကင်ဆာဖြစ်ရန် ၉ ဆနည်းပါး ပိုသည်။
၉-၅-၂ဝဝ၇။ လိင်ဆက်ဆံရာတွင် ပါးစပ်ကိုအသုံးပြုရန် အဖေါ် ၅ ယောက်ထက်ပိုသူများသည် မသုံးသူများထက် လည်ချောင်း ကင်ဆာဖြစ်ရန် အဆ ၂၅ဝ ပိုသည်။
၁ဝ-၅-၂ဝဝ၇။ Johns Hopkins Kimmel Cancer Center သုတေသနက Human papillomavirus (HPV) သည် ယောက်ျားရော၊ မိန်းမပါ Throat cancers လည်ချောင်းကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
၁၉-၂-၂ဝဝ၈။ Oropharyngeal cancer ခံတွင်း-လည်ချောင်းကင်ဆာ ကာကွယ်မည့် HPV vaccine ကာကွယ်ဆေးသစ် Gardasil သည် အမျိုးသမီးများအတွက်သာ ထိရောက်သည်။
၅-၁၂-၂ဝဝ၉။ Human papillomavirus (HPV) ရှိနေသူ ယောက်ျားအား ပါးစပ်သုံးဆက်ဆံနည်းလုပ်မိပါက Oral, Head, Neck, and Throat cancer ခံတွင်း၊ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ လည်ချောင်းကင်ဆာ တခုခုဖြစ်စေနိုင်သည်။
Thanks for the reply, saya:-)
ကျွန်တော်အသက် (၂၀) ရှိပါပြီ....
မိန်းမထက်ယောကျာ်းကိုယ်လုံးတီးပုံတွေက ကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးလိင်စိတ်ထကြွစေတာကို တွေ့နေရပါတယ်...
ရှိလာအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လို ပြုမူကုသ ရမလဲဆိုတာကို ကျေးဇူးပြု-ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ခင်များ....
ဆရာ ယောင်္ကျာတစ်ယောက်က လိင်တံအရွယ်အစားက ဘယ်လောက်ရှိသင့်သလဲ။ ပြီးတော့ အရွယ်အစား ပုံမှန်အချိန်မှာ 1လက်မကျော်ကျော်နဲ့ တောင့်တင်းချိန်မှာ 4လက်မ ရှိရင် ပုံမှန်အရွယ်အစားဟုတ်နိုင်လား။ အကယ်လို့ မဟုတ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ရိုင်းသွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ
ယြောင်္ကျားလိင်တံပတ်လည်ကဘယ်လောက်ရှိသင့်သလဲ။ ငါးမူးလုံးသာသာဘဲရှိတယ်ဆရာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅) Penis enlargement ကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ မဖတ်အားသေးရင် -
ကျွန်တော်တခုလောက်မေးလိုရမလားခင်ဗျား ကျွန်တော်သုတ်လွုတ်တာမြန်ပါတယ်။အဲတာရောဂါလားဘာဆေးဝါးတွေသုံးသင့်သလဲဆိုတာကိုညွန်ကြားပေးပါခင်ဗျား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
http://dts-writings.blogspot.com/ ထဲက အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၂) Early ejaculation ကို ဖတ်ပါခင်ဗျား။
တခြား ဆရာရေးထားတာလဲ http://health.ngoinmyanmar.org/ ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်မေးမယ့်အကြောင်းအရာက ဒီဆောင်းပါးနဲ့တော့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး
ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျစေချင်ရင် အရက်နဲ့ သွေးဆေးသောက်ရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျား ပြီးတော့ တောမီးတောက်အရက်နဲ့ဘာနဲ့ သောက်ရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်စေနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ့ ကျနော့ သူငယ်ချင်းတယောက်အတွက် အရေးတကြီး အကူအညီလိုနေလို့ပါ“
မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအရ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျအောင်လုပ်တာ အပြစ်ရှိပါတယ်။ အကြံတောင်းတာကို ဆေးပညာဗဟုသုတ အဖြစ်သာ ပြန်ရေးပါရစေ။
အရက်အပါအ၀င် ပြင်းထံတဲ့ဆေး၊ အစားအကောက်တွေဟာ ကိုယ်ဝန်နုတာကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ပျက်ကျတဲ့အထိ ဖြစ်မဖြစ်တော့ တပ်အပ် မပြောနိုင်ပါ။
မြန်မာသွေးဆေးကို ဆေးပညာအရတော့ မသိပါ။ လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာတော့ မြန်မာဆေးတွေသောက်ပြီး၊ ရာသီထိန်တာ၊ နောက်ကျတာကို ကုစားလို့ ရတာတွေ တွေ့ဘူးပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ Morning after pill ခေါ်တယ်။ Plan B လို့လဲ ခေါ်သေးတယ်။ Unwanted 72 (T Pill 72) လို့လဲ ခေါ်တယ်။ အိန္ဒိယမှာတော့ တရားဝင်ရောင်းလို့ ၂ လုံးတွဲဆေးတကပ်ကို ၃၂ ရူးပီးဘဲ ပေးရတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်ကို ပိုပြီးသိလိုရင် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/ ထဲက (Unwanted Pregnancy မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်) ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်နည်းလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ Privacy အရ သိလိုတာရှိရင် ကိုယ်ပိုင် (အီးမေးလ်) လိပ်စာကနေ မေးရင် တိုက်ရိုက် ပြန်ကြားပေးပါမယ် ခင်ဗျား။
(၁၀-၃-၁၀) နေ့ ရန်ကုန်ကလာတဲ့ (IRIN) သတင်းမှာ “ကိုယ်ဝန် ပျက်ခြင်း-ဖျက်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယ အဆိုးဆုံးသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သေဆုံးသည့် အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။” လို့ ပါတဲ့အတွက် သတိရှိဘို့ကိုပါ အကြံပေးပါရစေ။
ဆရာ ကျွန်မ အကြံတခု ပြုချင်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာက Website ကို ညွန်းပေးတာနဲ့ပဲ လုံလောက်ပြီလို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ကနေပြီးတော့ သန္ဓေတားတာကို အားပေးပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီးမှ ဖျက်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်းဟာ သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ လူသတ်ခြင်းဖြစ်လို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ e-mail နဲ့ဖြစ်စေ၊ ဘလော့ဂ်က ပို့စ်မှာဖြစ်စေ အကြံပြုတာမျိုးကို ကျွန်မ တယောက်တည်းအနေနဲ့ လုံးဝ သဘောမကျပါဘူး။ ဒီလို အကြံပြုလိုက်လို့ နောက်ထပ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်တဲ့ နည်းလမ်း နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ၊ မေးခွန်းတွေ ထပ်တက်လာတာမျိုးကိုလည်း ဒီဘလော့ဂ်မှာ ကျွန်မ မလိုလားတာ အမှန်ပဲ။ Health Care Ethnic အရလည်း လူနာကို မမြင်မတွေ့ရ မစမ်းသပ်ရဘဲနဲ့ ဆေးညွန်းကို ပေးလို့မရပါဘူး။ ဒီဘလော့ဂ်ဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လို ပြုမူကျင့်ကြံ၊ နေထိုင်စားသောက်၊ ကာကွယ်သင့်တယ် ဆိုတာ အထောက်အကူ ပြု အကြံဥာဏ်ပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး ဘလော့ဂ်အဖြစ်ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ အခုလို မေးခွန်းမျိုးအတွက် အွန်လိုင်းပေါ်က အကြံပြုလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ရင်ဆိုင်နေရသူနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ကျန်းမာရေးပညာရှင် (သို့) Health Care Counselor တယောက်ယောက်နဲ့ တွေ့ဖို့ကိုပဲ အကြံပြုသင့်တယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ အခုအကြံပြုတာ ဆရာ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ တယောက်တည်းကို မဟုတ်ဘူး ဒီဘလော့ဂ်မှာ စာရေးနေသူတွေ အားလုံးကို ရည်ညွန်းပါတယ်။
ဆရာ့ အီးမေလ်း ကိုတိုက်ရိုက်မေးလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာလား ဆရာ
ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာ့အီးမေးလ်လိပ်စာလေး ပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များသိသင့်သော လိုက်နာရမည့်အချက်များကိုဖော်ပြပေးပါရှင့်။ ဖောလစ်အက်စစ်အပြင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေးများကို ကိုယ်ဝန်ဘယ်နှစ်ပတ်တွင်စသောက်လို့ရပါလဲ။ကိုယ်ဝန် 10ပတ်ခန့်တွင် scanရိုက်လို့ရပါသလား။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်ပတ်သက်သော မြန်မာwedsiteebook များကိုလည်းဖော်ပြပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမိမြေရဲ့အဝေးမှာရောက်နေလို့ဆရာတို့ကိုပဲအားကိုပါတယ်။
စာတပုဒ် သပ်သပ် တင်လိုက်ပါပြီ။
hello dear sir, I want to know about the pregancy.i want to delete my wife's pregancy.how to do this case.Please help me sir because i have many problems.
I am sorry to advise on this matter because I got my medical degree from Burma and also I amaBuddhist.
But there are tens of thousands do this. In some countries it is legal.
However I add that subject in my writings just to cover all fields. Anybody can search in my Blog but not here. That does not necessarily mean I instruct you to do so. It is only for medical knowledge.
ကျွန်တော်မိန်းမ ကိုယ်ဝန်ရှိတာ ၂လနဲ့ ၅ ရက်ရှိပါပြီ
အခုတလော အဖြူတွေဆင်းနေတာ ၁၀ရက်လောက်ရှိပြီ
အများကြီးတော့မဟုတ်ပါ။ ဘောင်းဘီ စွန်းရုံသာဖြစ်ပါသသည်။ ကလေးအတွက်စိုးရိမ်ရလား။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာဖြေကြားပေးပါ။
ဒီ( ဆိုက်တ်) ထဲမှာ တင်ထား-မထား မမှတ်မိပါ။
Vaginitis မွေးလမ်း-ရောဂါ တွေကို
http://www.yamunaclinic.org/index.php?searchword=%E1%80%A1%E1%80%BB%E1%80%96%E1%80%B4%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8&ordering=&searchphrase=all&option=com_search မှာ လာဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဘာမှမဖြစ်စေပါ။
Tin Ko Ko Kyaw said...
ဒါနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော့်ချစ်သူနဲ့ ဆက်ဆံပြီးတဲ့ အချိန်ထဲက ဆီးအောင့်နေတာ 2ပတ်လောက်ကြာတယ်။အခုတော့ သက်သာသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းက နာနေသလိုတော့ ခံစားရတယ်။ဒါကာလသားရောဂါဖြစ်နိုင်ပါသလား။ဘယ်လိုကုသရမလဲ ဆရာ။
Aungkyaw maung said...
ဆရာ ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကအတူနေဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ပြီးတော့အပြင်မှာပဲပြီးတာပါ ဒါပေမယ့်အကာကွယ်မပါတော့စိုးရိမ်လို့စစ်ကြည့်တာတစ်ကြောင်းပဲပေါ်ပါတယ် ဆေးဆိုင်ကသေချာအောင်ဆိုပြီးcytotecကို၂လုံးသောက်၂လုံးသားအိမ်ထဲထည့်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကများမှာဆိုးလို့၁လုံးသောက်၁လုံးသားအိမ်ထဲထည့်ခိုင်းတယ်ထည့်တဲ့ညကသွေးနဲနဲဆင်းတယ်နောက်ရက်ထပ်မလာလို့ဆရာဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆရာဖြေကြားပေးပါ
ငယ် လေး said...
ayeko san said...
pro1homeit gmail said...
ကျနော် အသက်၂၀ ရှိပါပြီ။ ကျနော်အခုတလော ဆီးသွားရင် လိင်တံကပူပြီးတော့ကျင်နေပါတယ်။ပြီးတော့ ဆီးစထွက်ပြီဆိုရင် ဆီးထဲမှာ သုတ်ရည်ပုံစံ အနယ်လေးတွေ နဲနဲပါနေပါတယ်။ ဆီးကလဲတစ်ခါတည်းအကုန်တစ်ခါတည်းမထွက်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီါ်ခါနီးကို နည်းနည်းချင်း ထပ်ပြီးထွက်ပါတယ်(တစ်စက်ချင်း တော်တော်လေးကိုညစ်ထုတ်ရပါတယ်)။ ဆေးခန်းသွားပြဖို့ကလဲ ဘယ်လိုဆေးခန်းသွားရမယ်မသိတာရယ် ရှက်တာရယ်ကြောင့် မသွားဖြစ်ပါဘူး။အဲဒါ ရော၈ါလား စိုးရိမ်ရလားသိပါရစေ။ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေလုပ်ရမလဲ အတူနေတာကလဲ တစ်လကို ၂ခါလောက်ပဲနေဖြစ်တာပါ။အများဆုံး၎ခါလောက်ပါပဲဗျ။
bwar shwe said...